माधव समूहको राजीनामा रोकियो ! « Bagmati Online
माधव समूहको राजीनामा रोकियो !
काठमाडौं | एमाले नेता माधवकुमार नेपाल समूहको सामूहिक राजीनामा आजको लागि रोकिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पठाएका विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङसँग भेटेपछि राजीनामा रोकिएको हो।
ओलीले आफ्नो कदम नसच्चाए नेपाल समूहले आज सामूहिक राजीनामा गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, संसद् सचिवालयमा माधव समूहको सांसद् उपस्थित हुन थालेपछि ओलीले आफू पक्षका दुई नेतालाई पठाएका थिए। दुवै पक्षले आ-आफ्नो कुरा राखेको भए पनि कुरा मिल्न सकेको छैन। नेता नेपाललाई भेटेर फर्केपछि नेता पौडेलले राजीनामाबारे विचार गर्ने आश्वासन दिएको बताए।
उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘उहाँले राजीनामाबारे विचार गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँहरु विनाशको बाटोमा जानुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छैन।’ यस्तै बैठकपछि नेम्वाङले पनि माधव समूहको राजीनामाको कुरा चर्चा मात्रै भएको बताए।